Madaxweynaha Eritrea Oo Ka Degay Adis-Ababa | Somalia News
October 22, 2020 0 Less than a minute
Madaxweynaha Eritrea Oo Ka Degay Adis-Ababa
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, kadib casumaad rasmi ah oo ay ka heleen raysal wasaaraha dalkaas.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Bole International Airport ee Adis-ababa uga hortegay raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo mas’uuliyiin kale.
Afwerki oo seddex cisho halkaas joogi doona ayaa la filayaa isaga iyo Abiy inay yeeshaan kulan looga hadlayo xaaladda gobolka geeska.
Todobaadkii hore ayey ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahu Farmaajo booqasho labo beri ah ku tagey dalka Eritrea, isagoo halkaas kula kulmay madaxweyne Isaias Afwerki.
Next articleBuntilaan oo Xukunno Ku Ridday Rag Ku Eedeeysnaa Shabaabnimo